भाजपालाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रेसर सरकारलाई छैन् : डॉ गिरी - खबरम्यागजिन
Homeखबरभाजपालाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रेसर सरकारलाई छैन् : डॉ गिरी
गान्तोक, 8 सेप्टेम्बरः राज्यका अस्थायी शिक्षकहरूले गरिरहेको आन्दोलन आगामी दुई दिनभित्रमा समाधान हुनेछ भन्ने भाजपा सिक्किमको विश्वास रहेको छ। गत शिक्षक दिवसका अवसरमा आफूहरूले अस्थायी शिक्षकको समास्या समाधानको पहल गर्न सुझाउ दिएको 24 घण्टा नबित्तै शिक्षा मन्त्री स्वयं अघि आएर शिक्षकहरूलाई आन्दोलन समाप्त गर्न आग्रह भएको दाबी गर्दै राज्य भाजपा प्रवक्ता डा. राजु गिरीले अब दुई दिनभित्रमा समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले गान्तोकमा आज पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूको समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा पार्टी रहेको तर उनीहरू पनि वार्ताका लागि तयार हुनुपर्नेछ भने।
उल्लेखनीय छ, राज्य भाजपाको पक्षबाट पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरेर5सेप्टेम्बरका दिन भाजपा प्रवक्ता डा. राजु गिरीले अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या 48 भित्र समाधान गर्न सरकारलाई अल्टिमेटन दिएका थिए। तथापी आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन अवधि सोधिएको एउटा प्रश्नको जबाफ दिँदै डा. गिरीले सरकारलाई आफूले अल्टिमेटम होइन तर सुझाउ दिएको थियो भन्ने दाबी गरे। आफूहरूले दिएको सुझाउपछि नै शिक्षा विभागले अस्थायी शिक्षकहरूको समास्या समाधान सम्बन्धमा सरकारले तयार पारेका योजनाहरू अवगत गराएको बताउँदै सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्छ भनेर विभागले आश्वासन दिइसकेपछि अन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरू पनि समाधानको पक्षमा नै आउनुपर्छ भन्ने डा. गिरीले बताए।
सिक्किम सरकारले भाजपालाई अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानको आश्वासन दिइसेकाले भाजपा सरकारप्रति विश्वस्त रहेको उनले बताए। आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरूलाई वार्तामा ल्याउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै भाजपाले दुवै पक्षबिच मध्यस्तकर्ताको रूपमा काम गरिरहेको पनि बताए। भाजपा प्रवक्ता डा. गिरीले भने, हामी सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूमाझ जुझाजुझ भएर एउटाको सिङ्ग भाँचिएको हेर्न चहादैनो। शिक्षकको माग जायज छ अनि सरकारले पनि दिएको वचन पूरा गर्न केही ढिलाइ भएको स्वीकार गरेको छ। त्यसकारण दुवै पक्ष मिलेर नै समस्या समाधान होस् भन्ने हाम्रो प्रयास छ।
सरकार/विभाग र आन्दोलनरत शिक्षकहरूमाझ बिनासर्तको बातचित होस् भन्ने पक्षमा भाजपा रहेको उनले बताए। राज्यमा कुनै पनि मुद्दाको समाधानका लागि सरकारलाई दबाद दिन पछिल्लो सरकार देखिनै धर्ना प्रदर्शनीको प्रथा शुरु भएको र यो प्रथा राज्यो भविष्यका लागि उचित नरहेको ठहर गर्दै व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्ने उनले बताए।
अर्कोतर्फ भाजपा एसकेएम सरकारको मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुने विषयमा सोशल मिडियामा चलिरहेका कुरालाई उनले अफवाह मात्र हो। उनले भने, हामीबाट एसकेएम सरकारलाई कुनै प्रकारको दबाब छैन्। सरकारले कहीँ कतै गल्ती गर्दैछ भने त्यसमा ऐना देखाउने दायित्व हाम्रो हो तर भाजपालाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रेसर सरकारलाई छैन्। हामी सरकारसित चुनाउपछि भएको गठबन्धनमा छौं त्यसकारण पनि हामीलाई सरकारभित्र नै सामेल गराउनुपर्छ भन्ने दबाब छैन्। हामी दुवै एकाअर्काका सहयोगी भने पक्कै हौं।